Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha abazali sebekhathele ukulinda ubulungiswa ngezingane zabo ezashayiswa yimoto yemeya | Scrolla Izindaba
Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha abazali sebekhathele ukulinda ubulungiswa ngezingane zabo ezashayiswa yimoto yemeya
U-Asanda Ngcobo no-Olona Ndebele bobabili abaneminyaka eyi-13, bashona ngemuva kokushayiswa izimoto ebeziyisitimela ezaziphuma kwiMeya ye-IFP kwaNongoma u-Albert Mncwango ngoNtulikazi.
Ngaleso sikhathi uNgqongqoshe wezokuThutha, e-KZN uBheki Ntuli wathembisa ukuthi umnyango wakhe uzolubeka phambili lolu phenyo.
Kepha akukakenzeki lutho. Kuleli sonto abazali bezingane bakhulume nabakwa-Scrolla.Africa bathi sebelinde isikhathi eside ukuthi uhulumeni wesifundazwe aqedele uphenyo lwakhe.
Umama ka-Asanda, uThandi Ngcobo uthe akekho umuntu omtshelayo ngokuqhubekayo ngophenyo.
“Ngilokhu ngibona indodakazi yami emaphusheni ami futhi iyakhala. Mhlawumbe uma ubulungiswa sebenzekile ngizoba nokuthula,” kusho uThandi.
Uthe uKhisimusi walo nyaka uzoba usizi ngaphandle kwendodakazi yakhe.
“Isipho esihle engingasithola ngesokuthi abantu ababebandakanyeka bajeze. Yize lokhu kungeke kusayibuyisa ingane yami, kodwa kuzosiza ukomisa izinyembezi zami,” kusho uThandi.
UPhumzile Ndebele, umama ka-Olona, ​​uthe uzibonile lezi zinto zenzeka nakwabanye abazali.
“Lapho abathandekayo babo beshona kabuhlungu kuningi okubhekwayo ngabezindaba, kodwa lokho kusheshe kuphele. Futhi ubulungiswa abutholakali. Angifuni lokho kwenzeke kundodakazi yami enhle.”
Lezi zingane ezimbili zashayiswa zibuyela esikoleni zashonela endaweni yesigameko. Kuboshwe umshayeli oneminyaka engama-48 kanti kubonakala sengathi udedelwe ngebheyili.
IMeya uMncwango usamile ekutheni akahlangene nengozi njengoba ebengekho emotweni ngesikhathi yenzeka.
“Umshayeli wami ubesanda kungishiya endlini yami futhi ebeya kwakhe ngesikhathi kwenzeka le ngozi,” uyasho.
Uthe uzwelana nemindeni ngokulahlekelwa kwayo.
Okhulumela uMnyango wezokuThutha uKwanele Ncalane akazange ayiphendule imibuzo ethunyelwe kuye ebuza ngokuqhubekayo ngophenyo.
Okhulumela amaphoyisa e-KZN uKaputeni uNqobile Gwala uthe: “Udaba lusaphenywa.”
Akazange awuphendule umbuzo wokuthi umsolwa uboshiwe yini noma ubengaphandle ngebheyili.